Al-Shabab oo la wareegay degaan ay ciidanka DF uga baxeen mushahar la’aan – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 18th March 2019 0107
Al-Shabaab ayaa shaaciyay inay la wareegay deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeelaha Hoose, deegaankaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Ciidamada dowladda ayaa muddo ay ku qaadatay inay Deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose la wareegaan, hase yeeshee shalay gelinkii dambe ayey isaga baxeen, ayaga oo ka gadoodsan mushahar la’aan ku dhacday.
Dadka deegaanka qaarkood ayaa ku waramaya in Al-Shabaab ay deegaanka Dhanaane ku sugan yihiin, isla markaana ay fariisin ka dhigteen goobihii ay ka baxeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Deegaanka Dhanaane, ayaa dhaca waddada xeebta ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Marka, waana deegaan muhiim u ah ciidanka dowladda ee dagaalka kula jira Shabaabka Shabeellaha Hoose.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee qeybta 12-ka April, ayaa ahaa ciidankii halkaas ku sugnaa ee shalay isaga baxay
Saraakiisha hoggaamineysa Ciidamadan qeybta 12-ka April oo la hadlay Caasimada Online ayaa shaaca ka qaaday in sababta ay uga soo baxeyn deegaanka ay tahay ayada oo afar bil aan la siin wax mushahar ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhaqaale la’aan iyo musuq-maasuq ay isugu darsameen bilihii dhowaa, waxaana inta badan lacagta lagu bixinayey shaqaalaha rayidka ah, madaxda sare, dagaallada siyaasadeed, iyo warbaahinta iyo shaqsiyaadka dowladda ka ammaan baraha bulshada.
SAWIRO: Shiekh Mohemad Shakir Ali Hassan Madaxa Xukumadda Maamulka Galmudug oo Shir ka furay Magaalada Dhuusomareeb.
Ciidan lagu soo tababaray Turkiga oo yimid Muqdisho.
Deg-deg: Faahfaahintii Ugu danbeysey ee weerarka lagu qaadey xarunta shirarka Cadaado (Nin baa is qarxiyey halka seddex kalena…….)
Xildhibaanada Oo Hadal Ka Keenay Lacag Dhan $440,000 oo doollar AKHRISO.